Famaritana Product vatofantsika vatofantsika / amin'ny alàlan'ny bolt Surface Plain, Zinc plated, black, HDG System ofMeasurement Metric Place of Origin Yongnian, Hebei, China Brand Name TYB Material Carbon steel Q235 Diameter M6, M8, M10, M12, M14, M16, M20, M24 Halavany 40-400mm Standard DIN, ANSI, ISO, GB Certificate ISO9001: 2008 Kilasy 4.8 boaty fonosana + Carton + paleta MOQ 1.000.000 famokarana tariby vita amin'ny vokatra → Anneal → Acid cleaing → Atao tariby → famolavolana sy kofehy mihodina → Fitsaboana hafanana → Surfac ...
Izy io dia hoho natao ho an'ny hazo, izay hapetraka mafy ao anaty ala. Raha tsy simba ny hazo dia tsy azo atao ny mamoaka azy, ary na dia esorina an-kery aza dia hamoaka hazo eo akaiky eo. Zavatra iray hafa manamarika fa ny visy kitay hazo dia tsy maintsy asiana visy amin'ny visy. Aza mandondona amin'ny tantanana fa hanimba ny hazo manodidina azy io.
Ny tombony azo avy amin'ny visy hazo dia ny fahaizan'ny fanamafisana matanjaka noho ny famantsihana, ary azo esorina sy soloina izy io, izay tsy manimba ny tampon'ny hazo ary mety kokoa ampiasaina.
Ny mpanasa lohataona dia totofana amin'ny lovia vy.
Ny mpanasa lohataona: aorian'ny hidy, ny elastika elastika dia misy ny vokatry ny fanidiana, ary mazava ho azy fa mahantra ny vokadroa.
Voanjo tokana + fisaka fisaka, filalaovana tsihy: miantehitra amin'ny voanjo mihidy hery sy ny fahombiazan'ny fanidiana ondana, voanjo roa sosona.
1. Ny vatofantsika atsofoka dia natao ho an'ny tontolo beton-tany maina,
2. Drop in vatofantsika mila fitaovana fametrahana isaky ny habeny, ny horonan-tsary fametrahana dia mora hita amin'ny Internet.
3. Ny halavan'ny kofehy dia mitovy amin'ny halavan'ny vatofantsika antsasaky ny halavan'ny vatofantsika, ary ny haben'ny filatsahan'ny vatofantsika dia raikitra raha manana haben'ny kofehy ianao.
4. Ny tombony azo amin'ireo vatofantsika mitete: tsy misy na inona na inona mivoaka eo ambonin'ny tampoka raha vantany vao apetraka eo amin'ny beton ny vatofantsika.
5. Ny fitetezana vatofantsika dia azo ampiasaina amin'ny beton matevina fotsiny, satria mila hamono izy hametrahana azy, ka aza ampiasaina amin'ny biriky na vato.
6. Ny ambonin'ilay rano mitete amin'ny vatofantsika dia milamina foana, ny antsasaky ny karazana knurling feno koa dia azo omena ho an'ny friction lehibe kokoa.
Famaritana anarana Product Cart bolt Size M6-M52, 1/4 "-2" Kilasy 4.8 6.8 8.8 10.9 12.9 Fitaovana karbôna vy Q235 35k, 20MNTiB Standard DIN, ISO, GB, BS, ASTM Thread Coarse thread, Fine thread, Half thread, Kofehy ambonin-tany feno, mainty, zinc nopetahany takela-bato, HDG, Serivisy Dacromet OEM / ODM / fanaraha-maso kalitao namboarina, nandritra ny fitsapana famokarana, alohan'ny hametrahana ny fanamarinana ISO9001, santionany SGS azo alaina fonosana 25kg kitapo / baoritra + pallet Standard ...
Ny tsorakazo misy kofehy dia kofehy mifehy ary miasa noho ny kofehy, izay miteraka fihenan-danja avy amin'ny hetsika mihodina. Ny famolahana amin'ny tsorakazo dia mamela ny fanamboarana hafa toy ny bolt sy ny voanjo hikorontana mora foana na hihidy aminy.
Ny mpanasa lamba fisorohana dia misoroka ny filentehan'ny velarana mitondra, Ny tena andraikitry ny mpanasa lamba fisaka dia ny fampitomboana ny haben'ny velaran'ny faritra misy ny visy, ary hampihena ny tsindry ambonin'ilay zavatra nifatotra.
Bolt Coupling Nut, Hex Socket Bolt, Vatofenan'ny famoretana vy mihantona, Fehikibo vatofantsika fototra, Hex Socket Head Bolt, Sofina voa,